Qoysas Ku Nool Baydhabo Oo Deeq Raashin La Siiyay – Radio Muqdisho
Qoysas Ku Nool Baydhabo Oo Deeq Raashin La Siiyay
Dowlada Saldanada Cumaan ayaa shalay deeq raashin ah waxa ay u qeybisay dad danyar ah oo ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana dadkaasi qaarkood ay yihiin kuwa ka soo cararay colaada Yemen oo xaalada dhanka nolosha ah ay ku heysato Baydhabo.
Halka lagu qeybinayay deeqdaasi raashinka ayaa waxaa goob joog ka ahaa mas’uuliyiinta maamulka gobolka Bay iyo kan degmada Beydhabo, waxaana qeybinta raashinkaasi ay ku dhamaatay si wanaagsan.
Qoysaska raashinka loo qebinayay ayaa sida aad sawirada ka arki kartaanba waxaa si nidaamsan loogu qeybiyay raashinkii Dowlada Cuman ugu deeqday.
dadka danyarta ah ee ka faa’ideystay deeqdaasi ayaa waxaa ay sheegen in ay aad iyo aad uga mahadnaqayaan dhamaan howlwadeenada dowladda Cumaan iyo dadka gacanta ka geystay in deeqda la gaarsiiyo.
Maalmihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay waxaa ka socday siinta gar-gaar ay dadka masaakiinta ah ugu talo gashay dowladda Cumaan, iyadoo bulshada danyarta ah ee ku dhaqan guud ahaan magaalada Baydhabo ay yihiin kuwo u baahan caawimaad dhab ah.
Araaji Qabashada Musharaxiinta U Taagan Xilka Guddoonka Baarlamaanka Maamulka Galmudug Oo Heer Gaba gaba Ah Maraya
Wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo soo geba_gabeysay raashin qeybin ka socotay Muqdisho